काँइला ब्रो यस् पालिको झटारोले चैं "कपी-पेस्टकारहरुको" डडाल्नो नै खुस्काउने जस्तो मैले देखें । ..................म तपाईं सँग सोह्रै आना सहमत् छु।
खै ब्रो डडाल्नो खुस्काउन त मन थियो तर त्यस्ता चोर ब्लगरहरु यता पढ्न आए पो ? यो नेपालि ब्लग लिस्तले किन मेरो ब्लग लिस्ट राखेन कि तिनीहरुले पनि दरो झापड भटने भो कि के हो ? २ हप्ता भै सक्यो अनुरोध पठाएको, वास्ता व्यास्ता छैन बा !
"चोरको बात लाग्ने काम पनि गर्नु हुन्छ र ?" भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ तर यहाँ त "जो चोर उसकै ठूलो स्वर" बढी हावी छ। गुगलमा खोज्नै डर लाग्छ चोरी भएका भन्दा नभएका पोस्टहरू कम होलान । कत्तिलाई यताउती गरेर 'तह' पनि लगाईयो तर झन् झन नयाँ नयाँ चोरहरू निस्केका छन् के गर्ने ? ।
d.raj kandel said...
आम्मुई झटारो त.......''मुछे हो तो नथुलाल जैसे वर्ना न हो '' भने जस्तै झटारो हो तो यो ब्लोग्पोस्ट जस्तो वर्ना न हो ,,आइ लाइक it..ग्रेट थिंक्स
काइँला जीले भने झैं ब्लग चोरी शायद कुलत नै हो ।
आफू फुटिभाङ लेख्न नसक्ने, तर ब्लगर भइटोपल्ने लोभले तालु चिलाइरहने ।
कति चोर्लान् ? एकदिन त चोर्ने सकसले (कपी-पेस्ट गर्दाको थकान) तिनले विराल लेलान् नि ।
नत्र यस्ता चोर ब्लगरलाई निरुत्साहित गर्ने औषधि तिनका ब्लगमा धावा बोलेर मात्र गर्न सकिएला ।
नचोर्नु धर्म हो । खोइ कल्लाइ के भन्ने कल्लाइ के नभन्ने ? न चोर्ने त शायद कोइ नहोला व्यासले वेद लेख्दा पनि त्यतिखेरका विद्वान हरूबाट धेरै कुरा चोरेका थिए रे । मीठो र राम्रो कुरा हेर्नुस सबैलार्इ मनपर्छ लोभ लाग्छ, सबैले चोर्न खोज्छन कसैले पुरै चोर्छन कसैले अलि अलि । यसबाट मुक्त हुने एउटा उपाया छ त्यो हो सावर्जनिक ठाउँमा प्रकाशित नगर्नु,अाफैसँग सुरक्षित राख्नु । तपाइलार्इ थाहा छ केही कुरा हेर्नु मात्र पनि चोर्नु नै हो । फेरि चोर भन्न पनि अहिले त अलि अफ्ठेरो कुरा पनि छ Share को जमाना भन्छन् यस्तै गर्न खोजेका होलान है सर । अर्को कुरा तपार्इले अाफ्नो नाम पनि त सही राख्नु भा छैन नि? नेपाली उखानहरू धेरै सत्य र परिपक्क छन है सर... तपाइको कुरा नराम्रो हो भन्न खोजेको चाही कदापि हैन । यसलार्इ प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुहोला ।
dami lago ghataro
खबरदारीको झटारो राम्रै बज्रियो, केहि खस्छ कि !
bhim prasad said...
यस्तो हो नि । यसरी झटारो हाने पो करङ खुस्कन्छ, अनि लाज पचेकाहरूले अरूका सिर्जना कपी पेस्ट गर्न छाड्लान् । काँइला ब्रो, चेक गरि राख्नोस है तपाइको यही झटारो पनि कतै चोरी सके कि...
Sampras Paudel said...
के गर्ने हाम्रो किबोर्डमै खराबि छ क्या । "ctrl", "c" र "v" नभएको भए त कपीपेस्ट नै हुन्नथ्यो होला कि? अर्काको रचनालाइ आफ्नो भनेर कपि गर्नेलाइ गजबको झटारो छ है झटारो मित्र । चोर्न पाइन्छ? लुट्न पाइन्छ? अरुको रचना साभार गर्न नि पर्मिसन् चहिन्छ भन्ने हाम्लाइ लाइरा'च । झटारो जी सङ्ग मित्रताको हात अघि बढाउं कि?